महिलाहरुको सामाजिक र आर्थिक सशक्तिकरणमा लगानी
ज्ञानु पाैड्याल शुक्रवार, चैत्र २९, २०७५, ०९:५६:०० मा प्रकाशित
परिवार, समुदाय तथा मुलुकको समग्र सामाजिक एवम् आर्थिक परिवर्तनमा महिलाहरुको योगदानलाई अलग राखिएमा कुनै पनि मुलुकले पूर्ण विकास हासिल गर्न सक्दैन । विगतमा समाज तथा मुलुकको सामाजिक एवं आर्थिक रुपान्तरणमा महिलाहरुको योगदानलाई झिनो रुपमा मानिए तापनि समुदाय तथा मुलुकको आर्थिक सबलिकरणमा महिलाहरुको योगदानलाई घरहरुको पर्खालभित्र सीमित राखी सामुदायिक तवरमा त्यति महत्व दिएको पाइँदैन थियो ।
विगतमा महिलाहरुले उद्यम गर्नुपर्छ वा उद्यमी हुनुपर्छ भन्ने महत्वको महसुस गरिएको थिएन । महिलाले व्यवसाय किन गर्नुपर्‍यो भन्ने मान्यता समाजमा थियो । अझै सम्पन्न परिवारका महिला छन् भने तपाइको बुवाको सम्पत्ति छ वा लोग्नेको कमाई छ, किन दुःख गर्नुप¥र्यो ? वा छोरीलाई आयआर्जनको आवश्यकता नै छैन भन्ने चलन थियो । कालान्तरमा यो सोचमा परिवर्तन आएको विषय सबैले महसुस गरेका छन् ।
अहिले समाजमा महिलाहरु पनि आर्थिक कार्यमा सक्रिय रहेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ । तर, अझै यतिले मात्रै पुग्दैन । सुरु देखि नै महिला सीमित क्षेत्रमा मात्रै उद्यमीका रुपमा कार्यरत थिए । हस्तकला, घरमै बसेर गर्न सकिने सानातिना कामहरू, कृषि क्षेत्र, परिकार बनाउने जस्ता कामबाट महिला उद्यमशिलता विकास हुँदै आएको हो । पछि यसलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि आउन थालेको छ ।
बैंक र पर्यटन जस्ता सेवा क्षेत्रमा महिला थोरै थिए । अहिले उद्यम तिरपनि महिलाहरुको संख्या बढ्दैछ । अवसर पाए सबै क्षेत्रमा महिलाले सफलता हासिल गरेका छन् । इच्छा र आवश्यकता अनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सिप, सूचना, प्रविधि र लगानी गर्न सकियो भने आर्थिक रुपमा उनीहरु पनि आत्मनिर्भर हुन सक्छन ।
महिलाहरु सहकारी मार्फत बचत ऋण लगानी गर्दै सामाजिक कार्यमा पनि धेरै नै कार्य गरिरहेका छन् । शहरी क्षेत्रमा सञ्चारमा, होटेल व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रमा धेरै महिला उद्यमिहरु छन् । केही महिलाले व्यक्तिगत र सामुहिक रुपमा माछापालन, सामुहिक कुखुरापालन, पशुपालन र खुद्रा व्यापार, बुटिकमा राम्रो आम्दानी गरेको छन् । महिलाहरुमा प्रगतिशिल सोच आइसकेको हुनाले विगतको जस्तो स्थिति रहेन र समय विस्तारै परिवर्तन हुँदै गयो ।
आत्मविश्वासको कमी र सहयोगी हातहरुको कमी भएकोले नै होला, महिलाहरु सानो लगानी गर्ने सोच भन्दा माथि उक्लिन सकेका छैनन् । त्यसैले घरमा रही सुपो बनाउने, सिलाइकटाइ, सानो स्तरको हाँस, कुखुरा, बाख्रा, गाईभैसी पालन जस्ता काममा सीमित रहेका कारण मझौला उद्योग स्थापना गर्नतर्फ सोच अगाडी बढ्न नसकेको देखिन्छ ।
विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा जम्मा २ प्रतिशत महिला छन्, र सार्क क्षेत्रमा १० प्रतिशत मात्र । सार्कका सबै देशमा ५० देखि ५१ प्रतिशत महिलाहरुको जनसंख्या छ । यत्रो जनसंख्यामा जम्मा यति थोरै संलग्नता । तर, अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा महिलाको ८० प्रतिशत संलग्नता छ । विशेष गरेर कृषिमा । यति ठूलो योगदान छ उनीहरुको । तर, उनीहरूलाई सर्धैँभरी यही स्तरमा राखेर भएन, अब यिनलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्दछ, नीति बनाएर सहुलियत दिनुपर्छ उनीहरूलाई । पुरानो सीपलाई आधुनिक बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
समग्रमा, सामूहिक लगानी र समूहमा लगानी गरेर व्यवसायिक बनाउन सकियो भने महिलाहरूको कामलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा गणना हुने काममा प्रवेश गराउन सकिन्छ । भुटान र श्रीलंकाका महिला यसतर्फ अघि छन् । यसो हुनुको कारण छ । किनभने, सामाजिक संस्कारले पनि धेरै फरक पार्छ । श्रीलंकामा ९८ प्रतिशत साक्षरता छ । सबै शिक्षित छन् । यसले गर्दा आत्मविश्वास बढ्दो रहेछ ।
यस्तै भूटानमा पनि शिक्षा निःशुल्क छ । भुटानी पर्यटन क्षेत्रमा महिलाहरु पुरुष भन्दा निकै अगाडी छन् । उनीहरू एकदमै सक्षम छन् । पढेलेखेका छन् । व्यवसायमा लगानी गर्न हिच्किचाउँदैनन् । परिवारले पनि उनीहरूलाई सहयोग गर्ने रहेछन् । त्यसैले त्यो देशको सामाजिक संस्कार र शिक्षाको अवसरले पनि धेरै फरक पार्दो रहेछ । आर्थिक क्षेत्रको तुलना गर्ने हो भने, श्रीलंका र भुटान भन्दा हामी पछाडी नै छौ ।
बंग्लादेश, पाकिस्तान, भारतका तुलनामा नेपालका नीतिहरू भने लैगिंकमैत्री छन् । तसर्थ, यी नीतिहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि राज्यले गरिबीमा पिल्सिएका महिलाहरुमा उद्यमशिलताको विकास गर्नका लागि महिला उद्यमशिलता विकास कोष स्थापना गर्नुपर्दछ र सिपमूलक तालिम, कच्चा मालको पहिचान र जोहो, उत्पादन, बजारको पहिचान, बजारीकरण जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरुमा दक्ष बनाउनेतर्फ अग्रसर गर्दै लैजानुपर्दछ ।
मेरो ३० वर्षको सरकारी र सामाजिक क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको अनुभवमा पनि महिलालाई आर्थिक रुपमा अगाडी बढाउन सामाजिक मूल्य, मान्यता, सोच र धारणाले निर्णय गर्ने कुरामा प्रभाव पार्नुका साथै महिलालाई अगाडी बढ्न बाधा परिरहेको पाएकी छु । अर्कोतिर लैंगिक हिंसा, महिलाका स्वास्थ्य समस्या, पाठेघर खस्ने, गर्भको दौरानमा र सुत्केरी अवस्थामा आउने जटिलताले पनि आर्थिक कार्यमा बाधा पुगेको छ ।
तसर्थ, महिलामैत्री शिक्षा, स्वास्थ्य र उपचार जस्ता क्षेत्रहरुमा सरकारी लगानी बढाउने र आवश्यकता अनुसारका अन्य क्षेत्रमा महिलाहरुलाई उपयुक्त हुने सेवामा सुधार गरी एकीकृत सेवाको अवधारणा अनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रुपमा सशक्तिकरण गर्न सकेमा मात्र समाजमा महिलाको हैसियत बद्छ ।
नमूना एकीकृत विकास परिषद् रुपन्देहीको स्थापना देखि कार्य गर्दा रुपन्देहीमा ६५७ महिला र यूवा समुह सञ्जालसंग काम गर्दाको अनुभवमा हाल १६ हजार ४ सय २५ जनासंग प्रत्यक्ष काम गरिरहेका छौ । आर्थिक सबलीकरणका निम्ति जीविकोपार्जन कार्यक्रम मार्फत यस जिल्लाका १७ वटा सहकारीहरु मार्फत नमूनाले रु ७६ लाख २५ हजार बराबरको घुम्ती कोष लगानी गरेको छ ।
विदेशी वस्तुको प्रवद्र्धनमा गरेको प्रयासमा सहयोग समेत पु¥याउने उद्वेश्यले नमूना एकीकृत विकास परिषद्, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि महिला उद्यमशिलताका लागि ‘नमूना कोसेली घर’ को स्थापना गरी संकलन र विक्री केन्द्र नमूनाले आफ्नो शाखा कार्यालयमा स्थापना गरी सञ्चालनमा छ । त्यसै गरी लुम्बिनी महिला घरेलु उद्योगबाट उत्पादन साथै कोसेली घरले विपन्न वर्गका महिला, जोखिमता भएका समुह, द्वन्द्वप्रभावित महिला, एकल महिला, एच.आई.भी. संक्रमित व्यक्तिहरु, मानवबेचबिखनमा परेका किशोरीहरु र महिलाहरु, अपांगता भएका समुहहरु, हिंसामा परेका व्यक्तिहरुले उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामाग्रीहरुको उत्पादन र बजारीकरण गरी रोजगारको सिर्जना गर्दै आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ ।
यसैगरी स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन गरी पर्यटनको विकासमा पनि सहयोग पु¥याउने उद्वेश्यका साथ नमूना कोसेली घर गौतमबुद्ध विमानस्थल र जनउत्थान साकोस पहुँच सेवा केन्द्र भैरहवामा सञ्चालनमा रहेको छ । यी स्थानीय स्तरमा गरिएको राम्रा असल अभ्यासहरुलाई निरन्तरता जरुरी हुन्छ । आर्थिक रुपमा र सामाजिक रुपमा सशक्तिकरण गर्दै सेवाको उपाभोग गर्न र राज्यबाट बनेका कानुन कार्यान्यवनका लागि जवाफदेही बनाउन, कानुन संशोधनका लागि सुझाव दिन बहस पैरवी गर्न, हिंसापीडित महिलालाई सहयोगी भूमिका खेल्दै सम्बन्धित निकायमा पठाउन, सुरक्षित गर्भ र सुत्केरीका लागि कार्य गर्न संगठित समुह सञ्जालले राम्रो भूमिका खेलेका छन् ।
समुदायमा आधारित सामाजिक संस्थामा सबै आमाहरु आबद्ध रहेका र सम्बाद समुहहरुमा आकस्मिक कोषको व्यवस्था गरिएको छ । जब सम्म महिला आर्थिक रुपमा सशक्त भएर आत्मनिर्भर हुँदैनन, तब सम्म उनीहरू माथि हिंसा कम हुँदैन । हाम्रो आवाज नै यही हो कि महिलाले आयआर्जन गर्न सक्ने वातावरण बनाउँ । उनीहरूलाई सक्षम बनाउँ । यसो भएमा घरभित्रका समस्या आधा घट्छन् । लगानी गर्नुको साटो किन काम गर्नुप¥यो ? दुःख पाएको छैन भन्ने कुरा धेरै हुन्छ । दुःख पाएर मात्र जिन्दगीमा आत्मनिर्भर बन्ने होइन रहेछ ।
महिला पुरुष दुवै व्यवसायी भएमा परिवार, समाज र देशलाई नै फाइदा हुने हो, अर्थतन्त्र दह्रो हुने हो । आवश्यकता वा परिस्थितिले मात्र मान्छेलाई आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने सोचले अघि बढ्ने भन्ने हो भने आर्थिक क्षेत्रमा हाम्रो विकास र परिवर्तन कहिल्यै हुँदैन । आवाज उठाउन सबैभन्दा पहिला महिला सक्षम हुनुपर्दछ । त्यसैले हामीले अर्थिक क्षेत्रमा भएका महिलाले उनीहरूलाई सीप सिकाइ सक्षम बनाउन आवाज उठाइरहेका छौ ।
समाजमा देखिएको चूनौतीहरु कम गरी सामाजिक रुपान्तरण गर्न र जीविकोपार्जनको कार्य गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न सरकारी तथा सामाजिक संघ–संस्थाको समन्वयमा काम गरिरहेको छौ । आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको ठूला भुमिका छ भनेर सोचमा परिवर्तन ल्याउन एकदम चूनौती छ । धेरै महिलाहरुले उद्यमशिलता तालिम लिए पछि उत्पादन त गरे तर, बजारीकरण हुन सकेको छैन । हाम्रो देशमा कृषि राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।
जग्गा जमीनको प्रयोग गरी परिवारमै बसेर पुरानो शैलीलाई परिवर्तन गरेर अलिक आधुनिक प्रविधिमार्फत व्यवसायिक हुन कृषि क्षेत्र जस्तो सुरक्षित कुनै पनि क्षेत्र छैन । तर, दुर्भाग्य हामीसंग कृषिका लागि उपयुक्त वातावरण हुँदाहुँदै पनि हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपालका महिला युवाहरू विदेशमा यति कष्टपुर्ण काम गर्न जनशक्ति पलायन भइरहेका छन् । आफ्नो देशमा कर्म गर्न नपाउने निराशाजनक स्थिति छ र यो सोचमा कमी आएको अवस्था पनि छैन् । अहिले सहकारीमा आबद्ध महिलाहरुले बचत गरी आवश्यक सीप ज्ञान लिंदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आत्मनिर्भर कार्यमा अगाडि बढेका थुप्रै सफल उदारणहरु छन् ।
त्यस्तै गैरसरकारी क्षेत्रमा र स्वयंसेवी भइ कार्य गरिरहेका महिलाहरुमा ‘म पनि जोखिम र चूनौती लिन सक्छु’ भन्ने आत्मविश्वास आइरहेको छ । तर, अझै पनि उनीहरूमा परिवार, समाज र राज्यले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । सानो कार्य गर्न खोजेको अवस्थमा पनि ‘यिनले पनि व्यवसाय गर्न सक्छन् र’ ? आफूले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति डुब्ने पो हो की भन्ने खालको सोचाइ छ । पुरुषप्रति जति निर्धक्क भएर परिवारका सदस्यले लगानी गर्छन् त्यति नै लगानी छोरी, बहिनीहरूमा गर्नुपरेमा धेरै पटक सोच्छन् ।
अहिले महिला लक्षित कार्यक्रमहरु राज्यका स्थानीय तहबाट एकीकृत रुपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा पाउने सेवा बारेमा जानकारी लिने गर्न सकेमा सम्भावनाहरु पनि धेरै छन् । अब यी सबै कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि पनि योजनाको माग कसरी गर्ने, कहाँ योजना राख्ने भन्ने बारेमा महिला, लक्षितवर्ग जनता सबैलाई समेट्न सकेमा बल्ल उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ र श्रोतको सही सदुपयोग हुन्छ ।
जबसम्म आर्थिकरुपले सशक्तिकरण गर्न महिलालाई लक्षित गरी उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने मनसायले हाम्रा योजना, अवधारणा तथा कार्यनीतिहरुमा लैंगिकमैत्री र महिलाहरुले उपभोग गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सकिदैन, तबसम्म सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छैन । एक महिलाले ‘घरका साथै व्यवसाय पनि गर्न सक्छिन् र ?’ भन्ने हाम्रो नेपाली सर्वव्याप्त मानसिकता सोचमा पनि सकारात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ ।
अन्त्यमा, आर्थिक सबलीकरणले महिलाहरुमा आत्मविश्वासका साथ निर्णय लिने क्षमताको विकास हुने कारणवश उनीहरुको सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने नै छ भने, यस आर्थिक सशक्तिकरण वापत राजनीतिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरुको निकै अग्रसरता वृद्धि भएको छ । हाम्रो पटक पटकको संघर्ष पश्चात् प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानमा उल्लेखित प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसलाई संस्थागत गर्न जरुरी छ ।
केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा अबको पाटो महिला मैत्री, बालबालिकामैत्री, र अपांगतामैत्री वातावरण र नीति कार्यनीति रणनीति बनाउने र आफ्नो आवश्यकताको पहिचान गर्दै लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका साथ सामाजिक र आर्थिक सशक्तिकरणमा बजेट विनियोजन साथै प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्ने सुनौलो अवसर जिम्मेवारी हाम्रा जनप्रतिनिधिको कांधमा आएको छ । हाम्रो काम गर्ने सोच प्रतिबद्धता इच्छाशक्ति र सबैको सहयोग भएमा पक्कै पनि महिलाको आर्थिक रुपमा सशक्तिकरण र सामाजिक क्षेत्रमा जागरण भइ समग्र जीवनस्तरमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले अबको हाम्रो लगानी महिलाको सामाजिक र आर्थिक सशक्तिकरणमा जरुरी छ ।
(लेखक नमुना एकीकृत विकास परिषद् रुपन्देहीकी अध्यक्ष हुन् ।)
ज्ञानु पाैड्यालबाट थप
महिलाहरुको सामाजिक र आर्थिक सशक्तिकरणमा लगानी जबसम्म आर्थिकरुपले सशक्तिकरण गर्न महिलालाई लक्षित गरेर उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने मनसायले हाम्रा योजना, अवधारणा तथा कार्यनीतिहरुमा लैंगिकमैत्री र महिलाहरुले उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिंदैन, तबसम्म सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छैन । शुक्रवार, चैत्र २९, २०७५, ०९:५६:००